Inona no jerena amin'ny làlan'ny dinôzôro an'i Asturias | Vaovao momba ny dia
Inona no jerena amin'ny làlan'ny dinôzôro an'i Asturias
Maria | | Fialan-tsasatra, España
Na eo aza ny zava-misy fa ny fizahan-tany ara-tsiansa dia mbola incipient any Espana, mihamaro ny olona liana amin'ny fitsidihana na fitsangatsanganana mifandraika amin'ny siansa. Teo ambanin'io toerana io dia teraka i Dinópolis Teruel tamin'ny taona 2001, valan-javaboary tsy manam-paharoa any Eropa natokana ho an'ny dinôzôro izay nanomboka nanokatra ny varavarany dia nahasarika olona an-tapitrisany maro noho ny fitambaran'ny fialamboly sy siansa.
Na izany aza, tsy i Teruel irery no toerana any Espana izay ahitana ny taolambalon'ireo zavaboary Jurassic ireo. Amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Asturias, isan'andro dia mandalo fôsily sy soritry ny fisian'ny dinôzôro hita any avaratry ny firenena.
Ny lalan'ny dinôzôro an'ny Asturias dia mandrakotra ny morontsiraka eo anelanelan'ny tanànan'i Gijón sy Ribadesella. Mandritra ny tranonkala sivy dia ho hitantsika ireo dian-tongotra navelan'ireo dinôzôro teo amin'ity toerana ity an-tapitrisany taona lasa izay. Avy eo dia hanao fitsidihana fohy amin'izy ireo izahay mba hahafantarana azy ireo bebe kokoa.
2 Meron Beach
3 Ribadesella Beach
4 Cliff of Jiro
5 Cliff of Tereñes
6 Morontsiraka La Vega
7 Seranan-tsambo sy jiro Tazones
8 Museum an'ny Jurassic an'ny Asturias
Ny tranonkala malaza sy azo idirana ao Asturias dia eto. Afaka misaintsaina ilay mpitsidika, amin'ny lalana mifanandrify amin'ny morontsirak'i La Griega, iray amin'ireo lalana sauropod lehibe indrindra eto an-tany, 125 santimetatra ny savaivony, ary koa ichnites theropod hafa.
Ao Playa de Merón, an'ny filankevitr'i Villaviciosa, misy ny lalana navelan'ny dinôzôra quadruped rehefa mandeha. Izy io dia vita amin'ny pirinty tanana sy tongotra roa ambin'ny folo, ary koa sary masina tridactyl dinôzôro bipedal.
Ny morontsiraka Ribadesella, ankoatry ny maha-iray amin'ireo mpizahatany indrindra azy, dia manana dian-tongotra dinôzôro maro quadrupeds, angamba sauropods, izay mora hita eo amin'ny hantsana. Azonao atao ihany koa ny mahita ichnites vitsivitsy an'ny dinôzôro (theropods) eo amin'ny faran'ny diabe izay mandeha amoron-dranomasina.
Cliff of Jiro
Eo amin'ny hantsam-bato akaikin'ny tanànan'ny mpanjono any Lastres, akaikin'ny trano-jiro, dia misy dian-tongotra trondractil dinôzôro sy bobongolo. Ny mpitsidika dia tsy maintsy mandeha amin'ny lalana iray alohan'ny hahatongavany amin'ny vondrona ichnites isan-karazany, na sauropods na theropods. Anisan'izy rehetra ireo, dian-tongotra sauropod noforonina tamin'ny dian-tongotra telo lehibe izay nahafantarana ny rantsan-tanan'ilay biby.
Cliff of Tereñes
Miaraka amin'ny tranokala Colunga, ny Tereñes Cliff no iray amin'ireo manandanja indrindra. Any akaikin'i Ribadesella no misy azy ary miavaka ny dian-tongotra efatra an'ny ornithopods, ny iray theropod ary ny iray stegosaurus, izay itehirizana ny dian-tongotra sy ny tongotra. Azonao atao ihany koa ny mahita lalan-kely tridactyl maromaro noforonin'ireo dinôzôro bipedal.
Morontsiraka La Vega
Ao Playa de Vega dia misy iray amin'ireo tranokala dian-tongotra dinôzôro misy hatsaran-tarehy tsara tarehy, izay ahitanao ny ichnite telo tavela amin'ireto biby mandady ireto mandritra ny Jurassic.
Seranan-tsambo sy jiro Tazones
Ny lalana dia mifarana ao an-tanànan'i Tazones, tanàna fanjonoana manakaiky ny vavan'ilay havoana Villaviciosa. Ao amin'ny tranokala Puerto de Tazones, eo amin'ny hantsam-bato, dia afaka mahita lalana theropod sy sauropod isan-karazany ianao, raha eny amin'ny Faro de Tazones dia ahitanao dian-kazo maro caudruped, theropod ary dinôzôro kely ornithopod.
Museum an'ny Jurassic an'ny Asturias
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny dinôzôro sy ny fisian'izy ireo ao Asturias, dia mendrika ny mitsidika ny MUJA, izany hoe ny Jurassic Museum of Asturias. Ao amin'ny filankevitr'i Colunga no misy azy ary tranombakoka miavaka izy io, amin'ny endrika dian-tongotra dinôzôro lehibe, dia misy iray amin'ireo fampirantiana feno indrindra eto an-tany amin'ireo zavaboary mahavariana ireo.
Ny MUJA dia mampiseho ny fivoaran'ny fiainana ety an-tany hatramin'ny niandohany ka hatramin'ny fisehoan'ny olombelona, ​​miaraka amin'ny fanamafisana manokana ny Mesozoic sy ireo vanim-potoana telo ao aminy: Triassic, Jurassic ary Cretaceous.
Mba hahafahan'ny ankizy kely miala voly rehefa mianatra momba ny dinôzôro, hetsika, atrikasa ary lalao no karakaraina ao amin'ny tranombakoka Asturias Jurassic Museum mba hahatonga ny fitsidihana hahafinaritra kokoa. Miaraka amin'izy ireo dia azo atao ny manome fomba hafa amin'ny MUJA sy amin'ny fandalinana sy ny fandikana ny Paleontology.
Mba hamaranana ny fitsidihana ny MUJA dia tsara ny hivoahana any ivelany hisaintsaina ny manodidina satria manodidina anao dia manana fomba fijery mahaliana momba ny Ranomasina Cantabrian sy ny seranan-jono any Lastres ary koa ny Sierra del Sueve ary ny Picos de Europa.
Ny fidirana amin'ny Museum of the Jurassic of Asturias dia manana vidiny € 7,24 ho an'ny ankapobeny ary 4,70 € ho an'ny nihena. Ireto ny fotoana hitsidihana azy:
Nakatona ny alatsinainy sy talata.
Alarobia, alakamisy ary zoma, manomboka amin'ny 10:00 maraina ka hatramin'ny 14:30 hariva ary manomboka amin'ny 15:30 hariva ka hatramin'ny 18:00 hariva.
Sabotsy, alahady ary fialantsasatra ary manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 11 septambra, manomboka amin'ny 10:30 ka hatramin'ny 14:30 hariva ary manomboka amin'ny 16:00 hariva ka hatramin'ny 19:00 hariva.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Inona no jerena amin'ny làlan'ny dinôzôro an'i Asturias
Toerana ankafizin'ny bilaogera fitsangantsanganana roa ambin'ny folo
Data sy fampahalalana fototra momba an'i Espana